लकडाउन गर्न किन अल्मलिए प्रधानमन्त्रि ? :: Girija Kc :: लकडाउन गर्न किन अल्मलिए प्रधानमन्त्रि ?
लकडाउन गर्न किन अल्मलिए प्रधानमन्त्रि ?
लकडाउन गर्न किन अल्मलिए प्रधानमन्त्रि ? संक्रमण नियन्त्रण गर्न सरकारले कस्तो कदम चाल्नुपर्छ?
बुधबार, साउन २१, २०७७ Girija Kc
ललितपुर, २१ साउन । हिजो बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विभिन्न राजनीतिक व्यक्तित्व, अर्थ, स्वास्थ्य तथा सुरक्षा क्षेत्रका विज्ञहरुलाई बालुवाटार बोलाएर लकडाउन गर्ने वा लकडाउनको कमोडालिटि परिवर्तन गरेर कसरी अगाडि बढ्ने बारे करिव चार घण्टा लामो विस्तृत छलफल गरे ।
कोभिड–१९ को संक्रमण अवस्था, प्रभाव र रोकथाम तथा सुरक्षाका लागि भन्दै बोलाइएको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई विज्ञहरुले कम्तीमा २ साता लकडाउन गर्न सुझाव दिएका छन् । सुझाव दिएपनि यो पटक प्रधानमन्त्रिले दुईओटा कुरा बुझ्न चाहेका छन् ।
पहिलोः कोरोनाभाईरसको अवस्था अहिले देशमा के भईरहेको छ?
दास्रोः कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न सरकारले कस्तो कदम चाल्नुपर्छ?
छलफलमा सहभागी विज्ञहरुका अनुसार अधिकांश समय अब लकडाउनको मोडल कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा बहस भयो । केहीले पूर्ण लकडाउन र कर्फ्यु लगाउनुपर्ने मत राखे । तर, बहुसंख्यकले पूर्ण लकडाउन गर्नुको साटो अहिले सरकारले तोकेका मापदण्डहरु कडाइका साथ पालना गराउनुपर्ने र अर्थतन्त्र चल्न दिनुपर्ने बताए ।
सोहिअनुरुप प्रधानमन्त्री ओलीले आवश्यकता र सुझावलाई ध्यानमा राख्दै सरकार अघि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । कोभिड–१९ संक्रमणको रफ्तार तीव्र भइरहेको समयमा विज्ञहरुको सुझावअनुसार सरकारले फेरि पनि लकडाउन घोषणा गर्न सक्ने वा लकडाउनको मोडाललिटि परिवर्तन हुने संकेत देखिएको छ ।
चार महिना लामो लकडाउनका कारण व्यापार व्यवसायमा नराम्रो धक्का व्यहोरेका उद्योग, व्यवसायीहरु भने फेरि लकडाउन हुने हो कि भनेर त्रसित बनेका छन् । व्यवसायीहरुमा कतै फेरि त्यस्तै कठिनपूर्ण समयको सामना गर्नुपर्ने होइन भन्ने चिन्ता देखिएको छ ।
जेजसो भए पनि पहिलेको जस्तो लकडाउनको दुर्गति अब भोग्नु नपरोस् भन्ने व्यवसायीहरुको धारणा छ । यद्यपि लकडाउन गर्नैपर्ने स्थिति भएमा पहिलेको जस्तो अव्यवस्थित नभई सुरक्षा र आवश्यकताको आधारमा क्षेत्र निर्धारण गरेरमात्र लकडाउन गरिनु पर्ने व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।यदि त्यसो नभए मुलुकमा अर्को भयाभह अवस्था आउन सक्ने उनीहरुको चेतावनी छ ।
याे पनि हेराै
पुनः लकडाउनको तयारी, सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली
कम्तिमा १४ दिन तुरुन्त लकडाउन गर्न डाक्टरहरुको सुझाव
काठमाडौंमा ५१ सहित थप ४१८ जना सङ्क्रमित
प्रकाशित मिति: बुधबार, साउन २१, २०७७ १०:५४